Tijaabinta Eufy 2K Pan iyo Janjeeri, kamarad aad u fiican oo qiimo weyn | Wararka IPhone
Luis Padilla | | HomeKit, dhowr
Dejinta nidaam ilaalin fiidiyow ah way ka fududdahay sidii hore weligeed mahadnaq VideoKit Secure Video, iyo sidoo kale aad u raqiis ah annaga oo aan ku sameynin kamaradda xiisaha badan leh ee 2K Pan iyo Janjeeri ka socota Eufy in aan ku falanqeyno qodobkaan muuqaal ahaan.
2 Eufy Security, waa barnaamij aad u fiican.
Eufy ma ahayn mid murugsan marka ay timaaddo go'aan ka gaarista nashqadda kamaraddan, taas oo aan u baahanayn inay wax xun sidoo kale noqoto. Dhamaadka, kamaradda amniga waa inay u ekaataa iyada, maaddaama qayb ka mid ah shaqadeedu tahay inay ka hortagto khatar kasta oo suurtagal ah. Naqshaddiisa caadiga ah waxaa ka mid ah walxaha aasaasiga ah ee kamarad kasta: xaalad Xaaladda, afhayeenka gadaal, isku xiraha microUSB iyo badhanka dib u dejinta, iyo sidoo kale muraayadaha dhaqaaqa iyo madaxa wareegaya ee u oggolaanaya kamaraddu inay ku dhex socoto kaamirooyinka. iyo faasaska jiifka ah, si toos ah ama gacan adoo adeegsanaya barnaamijka.
Sanduuqa waxaa ku jira xeedho iyo fiilada microUSB, iyo salka si aan u awoodno inaan saqafka saarno, oo leh dun caadi ah oo aan u adeegsan karno inaan ku dhigno derbi (adoo adeegsanaya adabtarada aan ku jirin). Waxaan ku dhejin karnaa kaamerada si qumman dusha sare ama dusha saqafka, Joojin looma dhigi karo Isku xirka shabakadeena WiFi waxaa lagu sameeyaa shabakada 2,4GHz, mana laha batari isku dhafan, sidaa darteed had iyo jeer waxay lagama maarmaan noqon doontaa in meel ku dhow la heysto. Faahfaahin kale oo ah in la tixgeliyo waa iyada oo aan loogu talagalin adeegsiga bannaanka, sidaa darteed waa inaan doorannaa aag si wanaagsan looga ilaaliyo qorraxda tooska ah, roobka iyo qabowga haddii aan rabno inaan dhigno bannaanka guriga, ama si toos ah gudaha.
Waxaan wajaheynaa kamarad leh 2K xal, taas oo ah, laba jeer FullHD, in kastoo haddii aan ku isticmaalno Muuqaalka Muuqaalka 'HomeKit Secure Video' uu ku koobnaan doono FullHD (waxyaabaha ka socda HomeKit). Tayada muuqaalku aad ayey u wanaagsan tahay, oo leh xagal daawasho oo ah 125 digrii, oo aad moodo mid yar, laakiin taas ma ilaabi karno waa kamarad mooto sidaa darteed waxay ka badantahay sameynta la'aanta xagasha daawashada. Dabcan, waxaa ka mid ah aragtida habeenka, makarafoon si loo dhagaysto wax kasta oo ka dhaca dhinaca kale iyo sameecad si aad uga dhex hadli karto, iyo sidoo kale qalabka digniinta gacanta ama tooska ah. Kaydinta waxaa si toos ah loogu samayn karaa a kaarka microSD (illaa 128GB) ama daruuraha, ama HomeKit Secure Video ama adeegga daruur ee Eufy na siiso (adeegga kaliya ee lacag bixinta ee aan ka heli doonno kamaraddan).
Eufy Security, waa barnaamij aad u fiican.
Kaamirada amniga ma ahan wax aan laheyn barnaamij wanaagsan oo lala socdo, halkan Eufy waxay qabatay shaqo aad u fiican, iyadoo soo bandhigeysa codsi (isku xirka) oo leh ikhtiyaarro aad u horumarsan oo adeegyo kale looga qaado qaab ujro bille ah, iyo in shirkadda Eufy ay gebi ahaanba bilaash tahay markaad iibsato kamaraddaada. Aqoonsiga wajiga, sirdoonka macmalka ah ee kuu ogolaanaya inaad kala soocdo bini-aadamka ama xayawaanka, isbedelka gobolka oo kuxiran goobtaada (gudaha ama banaanka guriga), ogaanshaha oohinta, aagagga waxqabadka, socodka dhaqdhaqaaqaReally Runtii ma jiraan wax i tabay. Eufy kaliya waxay ku kacdaa kaydinta daruurta, taas oo gabi ahaanba ikhtiyaari ah maxaa yeelay waxaad dooran kartaa keydinta deegaanka adoo adeegsanaya microSD.
Wax aan aad ula yaabay markii aan tijaabinayay kaamerada ayaa ah xitaa inay ku siiso shaqada duubista cod si toos ah u ciyaaraya markay ogaato xayawaan soo galaya meel aad dejisay. Qiyaas inaad ka daashay eygaaga inuu fuulo fadhiga, maxaa yeelay markii kaamirada ay ogaato, wuxuu si otomaatig ah u dheeli doonaa codkaaga oo ku amraya inuu ka baxo fadhiga. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko wajiga eyga. Xakamaynta kamaradu waa wadarta arjiga, wuxuu noo ogolaanayaa inaan xakameyno dhaqdhaqaaqa, xitaa digniinta oo ay ugu mahadcelineyso wareegga wareega ah ee 360º. Ogeysiisyada casriga ah iyo nidaamka digniinta si aad u wanaagsan ayuu u shaqeeyaa, ma aanan helin digniin been ah tan iyo markii aan isticmaalay.
Waxaa jira ikhtiyaarro aad u tiro badan oo Eufy Security uu na siinayo inaad ku iloobi karto ku-habboonaanta HomeKit Secure Video. Adeeggan Apple-ka ah ha noo xusuusto taas waxay bixisaa kaydinta hal kamarad ah oo loogu talagalay qorshaha 200GB iyo illaa 5 kamaradaha qorshaha 2TB, Kaydinta fiidiyowga oo aan loo tirin doonin xadkaaga bannaan. Marka lagu daro keydinta daruuraha, Apple waxay na siisaa ogeysiisyo caqli-gal ah iyadoo kuxiran meesha ay ku yaalliin dhammaan kamaradeeda la jaanqaadi karta, ogaanshaha caqliga ee aadanaha, xayawaanka ama gawaarida, aqoonsiga wajiga, aagagga waxqabadka ... inta badan shaqooyinka aan horey kuugu sheegay ee ku saabsan app Eufy. Laakiin leh HomeKit Secure Video anaga dan kama lihin kaamerada iyo astaamaha, waxaan isku dari karnaa kaamirooyin kala duwan oo noocyo kala duwan ah, halka barnaamijka Eufy kaliya aan la tacaali karno kaamirooyinka Eufy ee la jaan qaada. Intaas waxaa sii dheer, is dhexgalka dhammaan aaladaha Apple waa wadarta barnaamijka Guriga.
Marka la eego HomeKit Secure Video waxaan lumineynaa xakameynta dhaqdhaqaaqa kamaradda, laakiin maadaama aan sii wadi karno ilaalinta barnaamijka Eufy Security, ma ahan dhibaato weyn sidoo kale. Si aan ugudareyno kaamerada HomeKit waa inaan marka hore kuxirnaa Eufy Security ka dibna, ka app laftiisa, u gudbi HomeKit. Joogtaynta labada codsi waa mid si dhammaystiran u suurtagal ah iyo sidoo kale kuwa ugu badan ee lagu taliyay, sidaa awgeed waxaan ilaalinaynaa sida ugu fiican ee labada adeeg.
Eufy wuxuu si xoog leh ugu sharaday kamaradaha amniga, waxayna ku sameysaa iyada oo siineysa xirmo qalab-kombiyuutar aad u fiican qiimo aad u xiiso badan, iyo iyada oo aan la helin nooc bille ah oo lacag ah si loogu raaxeysto xulashooyinka amniga ee ugu horumarsan. Ula jaanqaadida Fiidiyowga Amniga ee 'HomeKit Secure Video' sidoo kale waa gunno kuwa doonaya inay isticmaalaan aaladda otomaatiga guriga ee Apple. Anigana waxaan keydiyay wixii ugu fiicnaa ee ugu dambeeyay: qiimaha € 49,99 ee Amazon (isku xirka)
Eufy 2K Pan iyo Janjeeri
La jaanqaadi kara Fiidiyowga Amniga ee Homekit
App aad u fiican
Kuma haboona banaanka
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » HomeKit » Tijaabinta Eufy 2K Pan iyo Janjeeri, kamarad aad u fiican oo qiimo weyn leh
Waad ku mahadsan tahay dib u eegista, aad u dhameystiran.
Su'aal farsamo: waa in lagu qaabeeyaa 2.4 Ghz wifi, laakiin markaa markii lagugu xiro aaladahaaga 5 Ghz wifi ma leedahay marin u lahaanshaha sawirada? Mise waxaad u baahan tahay inaad ku jirto isla wifi kaameradda (2.4 Ghz)? Waad ku mahadsantahay jawaabtaada.
Mar alla markii la qaabeeyo macno malahan
Waad ku mahadsantahay jawaabta Luis.
Waad salaaman tihiin, waa su'aal ku saabsan shay aan aqriyay fikradaha. Waxay leeyihiin haddii aad ku xidho 'Homekit' uma sii isticmaali kartid barnaamijkeeda, taasi run miyaa? Taasi miyaa falanqaynta aad ku sheegaysaa inay macquul tahay: «Marka la helo HomeKit Secure Video waxaan lumineynaa xakameynta dhaqdhaqaaqa kaamerada, laakiin maadaama aan sii wadi karno ilaalinta barnaamijka Eufy Security, dhibaato weyn ma aha sidoo kale. Kameradda si loogu daro HomeKit waa inaan marka hore ku hagaajino Eufy Security ka dibna, barnaamijka laftiisa, u gudbinno HomeKit. Joogtaynta labada codsi waa mid si dhammaystiran u suurtagal ah iyo sidoo kale kuwa ugu badan ee lagu taliyay, sidaa awgeed waxaan ilaalinaynaa sida ugu fiican ee labada adeeg.
Ku soo jawaab Nederland
IOS 14.3 beta wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bilowdo barnaamijyo wata astaamo qaas ah si toos ah